Qorshaha doorashada Allians-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qorshaha doorashada Allians-ka
La daabacay måndag 1 september 2014 kl 13.55
Gelinkii hore ee maanta ayey soo ban-dhigeen xisbiyada ku midoobey garabka midig-Allianse, kuwaasina oo awoodda dalka gacanta ku haya qorshahooda wada-jir ee doorashada, midkaasina oo ey ugu magac-dareen: "Vi bygger Sverige - waxaan dhiseeynaa Iswiidhen", iyadoona uu sidan ku soo koobay guud ahaan macnaha ka dambeeya qortshahan wasiirka koowaad Fredrik Reinfeldt in qorshahani yahay mid aad horay loo arag oo muhiimad ballaaran ugu fadhiya siyaasadda dalka, sida ay sheegtay laanta wararka ee Ekot.
- Waa marka keliya inta aan la gaarin doorashada dalka uu garab keliya oo diyaar u ah inuu xilka awoodda hayo soo ban-dhigay dawlad u qalanta, isla-markaana shacabka ku war-gelisa howlaha ey diyaarka u yihiin iney qabtaan. Sidoo kale waa hoggaan horay laba jeer oo is xigta ugu guuleeystay inuu hir-geliyo qorshooyinkiisii. Looma baahna haddaba su'aalo dheeri ah ee wax la iska weydiiyo, sida uu sheegay Reinfeldt:
- Waxaan ballaan-qaadeynaa inaan dhaqaalaha dalka ilaalinno iyo in la abuuro goobo shaqo oo hor leh oo gaareya 350 000 ugu dambeeyn sannadka 2020.
Xisbiyada garabka midig ayaa si wada-jir ah u soo ban-dhigey qorshahoodii doorashada iyada oo doorashadii dalka ay gebi ahaan ka har-san tahay laba toddobaad.
Xisbiyada garabka midig Alliansen ayaa ballaan-qaadeya in haddii ey doorashada ku guuleeystaan aan kor loo qaadi doonin canshuuraha mushaarooyinka iyo shirkadaha iyo sidoo kale inaan la sameeyn dhimis canshuuro aan miisaaniyad loo heyn.
Qorshaha afarta xisbiga ayaan sidoo kale ey-san ka muuqan fikirro cusub. Maalmihii ina dhaafey ayey afarta hoggaamiye ee xisbiyada garabka midig kulammo ku qabteen goobo kala gedisan ee dalka ku yaala, halkaasina oo ey qayb qayb wax uga sheegeen fikirradooda doorashada iyo macnooyinka ka dambeeya.
Fikirradaasi oo ey ka mid ahaayeen in la dhimi doono tirada ardeyda ee fasal keliya wax ku wada dhigta, sannad lagu daro sannadaha la dhigto dugsiyada hoose/dhexe oo la gaarsiiyo 10 sannadood iyo sidoo kale shahaado lagu bixiyo adaabta ama anshaxa ardayga.
Dhanka kale garabka midig ee xisbiyada ku bahoobey Allians-ka ayaa soo ban-dhigay miisaaniyad lagu kabo cidda iibsanaysa gawaarida cimilada u wanaag-san (miljöbilspaket), iyo sidoo kale dawladda oo gacan ka geeysata maal-gelinta dhismaha 10 000 oo goobood oo hor leh ee laga buuxiyo gawaarida korontada ku shaqeeysa, in kor loo qaado ciqaabta dembiyada culculus iyo in la sii dhimo gunnada shaqaaleeynta shirkadaha dhallin-yarada da'doodu ka hooseeyso 23 jir.
Madaxa dawladda Iswiidhen oo ku qanac-san qorshadoodan wada-jir ayaa sidan ku soo koobay natiijada hoowlaha Allians-ka:
- Midda ugu muhiim-san ee aan bulshada Iswiidhen u sheegeeyno waxay tahay inaan ilaalin doonno xaaladda dhaqaale ee dalka. Waxaannu dhisi doonnaa derbiyo xooggan oo wax-yeelooyinka ka ilaaliya dhaqaalaha iyo inaan diyaar u ahaanno caqabadda dhaqaale ee mustaqbalka na haleeli karta, sida uu sheegay Reinfeldt.